Igumbi lokulala eli-2 kwiNdawo yokuThengisa (Ikhuselekile kwaye izolile) - I-Airbnb
Igumbi lokulala eli-2 kwiNdawo yokuThengisa (Ikhuselekile kwaye izolile)
Le Cottage inomtsalane ikwilali entle yase-Englefield Green. Iikhilomitha nje ezine ukusuka kwiNqaba yaseWindsor, iimayile ezintathu ukusuka kwiKhosi yeGalufa yaseWentworth kunye neekhilomitha ezintandathu ukusuka kwiKhosi yoMdyarho yaseAscot. Isikhululo seenqwelomoya saseHeathrow ukuba umgama oziikhilomitha ezintandathu kuphela.
Iimitha ezingama-300 ukuya ezantsi kwendlela yiRoyal Air Force Memorial kwaye ngaphantsi koko, kumhlaba weTrasti yeSizwe enqumla kuMlambo iThames yiSikhumbuzo saseMagna Carta. IYunivesithi yaseRoyal Holloway kukuhamba ngemizuzu elishumi ukunqumla ilali.
I-Cottage ilungile kwizibini ezitshatileyo, abahamba bodwa, abahambi beshishini, Iintsapho (kunye nabantwana), amaqela amakhulu, abahlobo abanoboya (izilwanyana zasekhaya).
Isakhiwo esikhuseleke kakhulu esinesango lokungena. Kakhulu kakhulu.
4.99 · Izimvo eziyi-191
ICottage kukuhamba nje ukusuka eWindsor Great Park, iRoyal Park egubungela iihektare ezingama-5,000 eyayithandwa ziiKumkani zaseSaxon njengeHlathi lokuZingela.
Likhaya leCopper Horse, iGadi yaseSavill kunye neVirginia Water Lake kunye noSmith Lawn ophethe iCartier Polo. Ixhama lizulazula ngokukhululekileyo ecaleni kweGreat Walk, indlela ebalaseleyo ekhokelela kwiWindsor Castle.
Ndiza kufumaneka xa ndiceliwe ukukunceda wenze ukuhlala kwakho kukhululeke kangangoko kunokwenzeka.